सबै गाउँपालिकामा पुग्यो केन्द्रीय प्रशारण लाइन « Mechipost.com
सबै गाउँपालिकामा पुग्यो केन्द्रीय प्रशारण लाइन
प्रकाशित मिति: १५ फाल्गुन २०७७, शनिबार २२:०९
पाँचथर, १५ फागुन । पाँचथरका सात वटै गाउँपालिकामा विद्युतको केन्द्रीय प्रशारण लाइन विस्तार भएको छ ।
जिल्लाका याङवरक र फालेलुङ गाउँपालिकामा केन्द्रीय प्रशारण लाइन विस्तार हुन बाँकी थियो । दुवै गाउँपालिकामा लाइन विस्तार गरी चार्ज गर्ने तयारी गरिएसँगै जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा केन्द्रीय विद्युत प्रशारण लाइन पुगेको हो ।
दुवै गाउँपालिकाका मुख्य स्थानमा केन्द्रीय प्रशारण लाइन जोडिएपछि केही सातामै घर–घरमा विद्युत विस्तार हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरण फिदिम वितरण केन्द्रका प्रमुख साजन महर्जनले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण फिदिम वितरण केन्द्रले याङवरक गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ मा विद्युत लाइन विस्तार गरी सोमवारसम्ममा लाइन चार्ज गर्न लागेको छ । यहाँ विस्तार गरिएको विद्युत प्रशारण लाइनले जिल्लाको सुदूर उत्तरी क्षेत्र च्याङथापू र फलैंचाका विभिन्न वस्तीहरुमा केन्द्रीय प्रशारण लाइनको विद्युत पु¥याउने छ ।
यस्तै आगामी साता फालेलुङमा लाइन चार्ज गर्ने तयारी भइरहेको केन्द्रका प्रमुख महर्जनले वताउनुभयो । “फालेलुङको क्षेत्र निकै ठूलो भएकाले छिटै विद्युत विस्तार गर्ने प्रकृयामा पु¥याउछौँ”, महर्जनले भन्नुभयो ।
फालेलुङको वडा नं. ३ देखि ८ सम्म केन्द्रीय प्रशारण लाइन विस्तार गर्ने तयारी गरिएको हो । उक्त गाउँपालिकाका बाँकी दुई वटा वडामा सहकारीले विद्युतिकरणको कार्य अगाडि बढाएको छ ।
जिल्लाका हिलिहाङ, फाल्गुनन्द, तुम्बेवा र मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा एक वर्षअघि नै केन्द्रीय विद्युत प्रशारण लाइन जडान भइसकेको छ । यी गाउँपालिकाका कतिपय स्थानमा प्राधिकरणको वितरण केन्द्रले विद्युत जडान गरेको छ भने केही स्थानमा सहकारीहरुले विद्युतिकरणको कार्य अगाडि बढाएका छन् ।
फिदिम नगरपालिका र कुम्मायक गाउँपालिकामा भने दशकअघि नै फिदिममै उत्पादित विद्युत जडान भएको थियो । यद्यपी स्थानीय तहहरुका सबै घरमा भने विद्युत जडान हुन सकेको छैन् ।
केन्द्रीय प्रशारण लाइन विस्तार हुन बाँकी दुई गाउँपालिकामा समेत लाइन विस्तार भएपछि जिल्लाका सबै घरहरुमा विद्युत विस्तार गरी पूर्ण विद्युतिकरण भएको जिल्ला घोषणा गर्ने तयारी समेत अगाडि बढाइएको छ ।
जिल्लामा डेढ दर्जनभन्दा बढी विद्युत सहकारी संस्थाले ग्रामीण विद्युतिकरणको कार्यलाई अगाडि बढाउँदै आएका छन् । केन्द्रीय प्रशारण लाइन विस्तार हुनुपूर्वमा फिदिममा फिदिम साना विद्युत सहकारी संस्थाले विद्युत उत्पादन गरी फिदिम नगरपालिका क्षेत्र सहित कुम्माक गाउँपालिकामा समेत विद्युतिकरणको कार्य गर्दै आएको थियो । उक्त सहकारीले यहाँका करीब ७६०० घरमा विद्युत जडान गरेको छ ।
ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्थाहरुले सरकारको ९० प्रतिशत तथा सहकारी र उपभोक्ताको १० प्रतिशत लागतमा विद्युतिकरणका कार्य अगाडि बढाउँदै आएका छन् । विद्युत प्राधिकरणबाट विद्युतिकरणको कार्य सुरु हुन नसकेका बेला सहकारीहरुको अगुवाई विद्युतिकरणका कार्य सुरुआत भएका थिए ।
प्राधिकरणले फिदिममा वितरण केन्द्र स्थापना गरेपछि प्राधिकरण, सहकारी र प्राधिकरणको काबेली कोरिडोर ग्रामीण विद्युतिकरण आयोजनाबाट विद्युतिकरण कार्य हुँदै आएका छन् ।
“हालसम्म ८५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत जडान गर्ने पूर्वाधार तयार भएका छन्”, प्राधिकरणको फिदिम वितरण केन्द्रका प्रमुख महर्जनले भन्नुभयो, “यसैवर्ष पूर्ण विद्युतिकरण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।”
तीन वटा निकायबाट विद्युतिकरण कार्य हुँदै आएकाले यकिन तथ्याङ्क तयार हुन सकेको छैन् । वितरण केन्द्रले सहकारी संस्थाबाट विद्युतिकरणको कार्य हुन नसकेका स्थानहरुमा काम गर्दै आएको छ ।
दुई वर्षअघि स्थापना भएको वितरण केन्द्रबाट हालसम्म करीब ७१०० घरमा विद्युत विस्तार भएको छ । “फागुन मसान्तभित्र वितरण केन्द्रबाट थप तीन हजार घरमा विद्युत जडान हुन्छ”, केन्द्रका सूचना अधिकारी सनोज यादवले भन्नुभयो, “सहकारीहरुले उत्तिकै तीब्र गतिमा काम गरिरहेका छन् ।”
प्रायजसो सहज रुपमा विद्युत लाइन विस्तार हुनसक्ने ठाउँहरुमा सहकारी गठन भई विद्युतिकरणका कार्य हुँदै आएका छन् । विद्युत प्राधिकरणले काबेली कोरिडोर ग्रामीण विद्युतिकरण आयोजनाबाट पाँचथर सहित इलाम र ताप्लेजुङका विशेष क्षेत्रहरुमा विद्युतिकरणको कार्य गर्दै आएको छ ।
पाँचथरबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङको पहलमा उक्त आयोजनाले पाँचथरमा विद्युतिकरणमा थप लगानी गरिरहेको छ । सांसद् र मन्त्री नरहेका अवस्थामा समेत नेम्वाङले ग्रामीण विद्युतिकरणका लागि पहल लिँदै आउनुभएको थियो । फलस्वरुपः पाँचथरमा छिमेकी जिल्लाहरुभन्दा अघि नै विद्युतिकरण पूरा हुने आँकलन गरिएको छ ।